Zvakanakira nekuipira aiming chacho muenzaniso nepachinko yaiitirwa
トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Zvakanakira nekuipira aiming chacho muenzaniso nepachinko yaiitirwa
In patafura chiitiko, ichokwadi kuti kunyange nepachinko parlors inofungidzirwa zvichida kupa mu kupfuura dzose. Zvisinei, izvozvo zvinoreva kuti kuchikuva yose kuchinja kwakadaro haisi Ichokwadi. In, panguva chacho, tichakurukura zvakanakira nekuipira kuti yakarova chiitiko womuenzaniso. Achitaura zvazvakashatira
chiitiko womuenzaniso, chiitiko muenzaniso kana chiitiko ndiyo nyaya pakupora muchina.
kwakanyorwa, pasi zvakajairika ezvinhu, anoonekwa kakawanda kana une muenzaniso kuti haina zvikuru vachimhanya vari chiitiko muenzaniso. Nokuti womuenzaniso hapana oparesheni panguva dzose, tine nyaya yavaipora muchina kuti piggyback pamusoro kumhanya-up of chacho. Uyezve, pane nyaya iri sefungu chakaipa nokuti hazvisi kunhivi dzose nguva, pane mukana kuti mubhizimisi inowedzerwa. Kutarisa
somuenzaniso chipikiri kugadziridzwa, zvingava nyore kunzwisisa zvakanakisisa.
akatambanudza chiitiko rakawandisa uye tepid womuenzaniso, chipikiri kuchinja panguva chacho mienzaniso kuti inokurukurwa rakakwana kupora muchina, kana akanga chete vachiimba pamwe nezvakaitika chakaipa ezvinhu pasina tampering chinhu, zvichida kumira dzakabatanidzwa rokutanga chete, uye kana kuti chete kuvhura zvishoma, ezvipikiri yachinja achava rimwe kana maviri.
munguva chiitiko, nekuti yakatarwa pfungwa kuti ariswededze pane zvachose, uchava vanowanzotevedzera mari dzingirira zvinopfuura zvenguva. Parutivi nepachinko yokumusoro, asi ndicho chinangwa.
kana zvipikiri vari zvakasimba, chiitiko womuenzaniso iri kudziviswa, Zvinokurudzirwa yakarova wokuenzanisira zvirokwazvo, dzakadai zvikwangwani yokutevedzera. Saka hakukodzeri kupinda akadaro demerit chiitiko yokutevedzera, tapota ziva kuti aone zvakanaka zvatinosiita chipikiri kuchinja.
Naizvozvo, achitaura inotevera munorumbidzirweiko, ndiyo nyaya chimiro zvakazara vhura chiitiko muenzaniso nenguva chacho ari kudzima nomwoyo wose. Sezvo zviitiko, ndava kuedza Kushumira mu nepachinko parlors. Zvikurukuru kana tine michina mutsva chiitiko muenzaniso, kana uine quasi-Xintai mienzaniso uye nezviratidzo muenzaniso ari chiitiko yokutevedzera, unogona kunzi vanonanga muenzaniso wokutanga.
_x00 It 0D_ kutaura sei mienzaniso yakadaro Zvakadini kana chinangwa chiitiko wokutanga womuenzaniso, unenge achimhanya panguva dzose nguva zvikuru zvinobatanidzwa.
Panguva chacho, ndizvo zvakajairika oparesheni ini neniwo saka saka kumhanya isnt muenzaniso. Chii chauri achiti Xintai uye quasi-Xintai, uyewo dzakakurumbira mhando dzakadai billboard womuenzaniso, akati kumhanya kunyange zvazvo kusiya kungapfuurira zvinopfuura zvenguva. Chokwadi kuti vakadaro vauye angashinga zviitiko zvinoedza muenzaniso ndechokuti chiri chiitiko icho unoda kuita zvikuru payout nyaya.
zvakare rokuongorora dzakakomba kwadzinoita yose nepachinko yokumusoro iri chiitiko, ndiwo maonero kuti kushandisa zvakanaka. Panguva zviitiko zvinokosha zvakadaro, kazhinji kuuya akavhura wosewo chipikiri kuchinja. Kusiyana zvakaipira chiitiko wokuenzanisira, namapoka vashomanana inowanzotorwa chipikiri kugadziridzwa, vamwe tiri kazhinji zvakakwana rakashama.
tafura kusarudza yatovapo, tarisa mashoko pane kutarisa zvipikiri, inoti kuti munhu kuongorora sefungu pachikuva kungava pokutanga. Nenzira iyi, mumwe chete pane chiitiko muenzaniso, unogona kusarudza imwe zvakaipira midziyo yakawanda kupora kana rinobatsira chaizvo kusunungurwa muchina zvakanaka vanozivikanwa kuhwina kubva muzana zvinosiyana zvikuru. D_ tafura yekusarudza, tarisa mashoko pane kutarisa zvipikiri, inoti kuti munhu kuongorora sefungu pachikuva kungava pokutanga. Nenzira iyi, mumwe chete pane chiitiko muenzaniso, unogona kusarudza imwe zvakaipira midziyo yakawanda kupora kana rinobatsira chaizvo kusunungurwa muchina zvakanaka vanozivikanwa kuhwina kubva muzana zvinosiyana zvikuru. D_ tafura yekusarudza, tarisa mashoko pane kutarisa zvipikiri, inoti kuti munhu kuongorora sefungu pachikuva kungava pokutanga. Nenzira iyi, mumwe chete pane chiitiko muenzaniso, unogona kusarudza imwe zvakaipira midziyo yakawanda kupora kana rinobatsira chaizvo kusunungurwa muchina zvakanaka vanozivikanwa kuhwina kubva muzana zvinosiyana zvikuru.